Ny momba anay - Sekoly Malagasy eto Montreal
Ny hananan’ireo mpianatra SMM fotoana hihaonana sy hianarana ny tenin-drazantsika, ny maha malagasy ary ny mba tsy hanadinoina izany;
Ny hampifandray ny tanora, ny ankizy amin’ny malagasy sy ho an’izay rehetra maniry hianatra izany;
Ny fampianarana ny teny sy ny fomba amam-panao malagasy amin’ireo vahiny avy eto Kanada ka lasa misionera tany Madagasikara na ireo izay tafaverina dia mbola maneho ny hetahetany amin’ny fitohizan’ny fianarany ny teny malagasy.
Ny fampahafantarana an’i Madagasikara sy ny fampitana ny kolon-tsaina amin’ireo manodidina antsika eto Montréal/Québec sy Kanada
Fampianarana teny Malagasy fampiasa andavanandro;
Fampianarana hira sy dihy isan-karazany ;
Fandraisana anjara amin’ny dihy miaraka amin’ireo mpandihy vahiny avy amin’ny firenena samihafa izay mipetraka eto an-toerana;
Famakiana teny, fanaovana sary sy tao-zavatra, manoratra;
Fampianarana fandrahoana sy fanandramana ny sakafo malagasy : vomanga, saonjo, mofo baolina, mofo menakely, mofo akondro, koba, mofo mangahazo, sns.
Fampianarana kilalao fahiny: katro, fanorona, kifanga, solitaire, tsobato, rahosy jamba, avy mangataka izahay, ara-jiro, tanisa, sabaka, sns.
Fampianarana fanaovana tantara, angano, tantara andampi-hazo, ankamantatra, tsianjery, hatsikana;
Fampahafantarana an’i Madagasikara ara-tantara, jeografia sy ny hasina maha malagasy.
Fampianarana ny manodidina sy fampahalalana ny fiainana andavanandro : momba ny fianakaviana, ny fialam-boly, ny fahasalamana sy ny vatana, ny fanisana, sns.
Fifanakalozan’ny tanora Malagasy amin’ny tanora vahiny eto Kanada, fifanoratana (correspondance) amin’ny alalan’ny internet amin’ny ankizy na sekoly any Madagasikara ary fanaovana projet;
Mampihaona ny ankizy eto Montréal isam-bolana mba hananan’izy ireo ilay fomba fisainana tia mihavana sy mivondrona;
Mampihaona isan-taona ny ankizy malagasy eto Kanada;
Fanangonana fitaovana ho any Sekoly : boky, sary mihetsika, oronam-peo, fitafiana, lambaoany, zava-maneno, sns.